Kullan u dhaxeeyay Wasaaradda Qorsheynta XFS iyo Xafiiska Xeer ilaaliyaha Guud oo ka dhacay Muqdisho “Sawirro” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Kullan u dhaxeeyay Wasaaradda Qorsheynta XFS iyo Xafiiska Xeer ilaaliyaha Guud oo ka dhacay Muqdisho “Sawirro”
Muqdisho (SONNA)-Kullan u dhaxeeyay Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Xafiiska Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa maanta ka dhacay Xarunta Xeer Ilaalinta Qaranka, kaasi oo looga hadlay arrimo dhowr ah.
waxaa ka soo qeyb galay kulankaasi Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka, Wasiirka Wasaaaradda Qorsheynta XFS, Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Qorsheynta, Ku-xiggeenada Xeer Ilaaliyaha Guud, agaasimeyaasha iyo qaar kamid ah howl wadeenada labada xafiis.
kulanka oo muhiimad gaar ah u lahaa labada dhinac ayay Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ku soo bandhigtay warbaxin ku aaddan geeddi socodka qorista Qorshaha horumarinta Qaranka.
Sidoo kale Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka ayaa warbixin kooban ka jeediyay kullanka, toosi oo diiradda uu ku saaray howlaha Xafiiska oo ay ugu mihiim sanaayeen Tababarada shaqaalaha ,Dhismaha Xafiisyada Xeer Ilaalinta iyo Qorshaha u degsan Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka.
Ugu dambeyn Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka ayaa boggaadiyay Shaqada Wasaaradda Qorsheynta ay ka waddo Dalka, waxuuna si aad ah uu ammaanay tiirka Kala sareynta Sharciga, Isla markaana Wasaaradda Qorsheynta uga mahad celiyay wada-tashiga ay la yeelatay Bahda Garsoorka Dalka.